အလယ်ခေတ်နှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (၂၀၁၄) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn
comments: နောက်ထပ်လေ့လာမှုဖေါ်ပြခြင်း gawd-ရွားလှ ED နှုန်းထားများ အမျိုးသားများတွင်:
40-51 နှစ်ပေါင်းအတူယောက်ျားအတွက်ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့ 58.6% ခဲ့သည်
သုတေသီများ ED နှုန်းထားများလူပျိုတို့အတွက်တက်ပြီးသောလေ့လာရေး မှလွဲ. အခြားကောင်းသောအရာမရှင်းပြချက်, ပူဇော်ကြ၏။ ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အတူသကဲ့သို့, သုတေသီများအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် ပတ်သက်. မမေးခဲ့ချေ။
သို့သျောလညျး, ငါတို့သည်လည်းဒီလူဦးရေအတွက်အများအပြားညီမျှမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ 40-51 နှစ်ပေါင်းအတူယောက်ျားအတွက်ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့မှု (58.6 နှင့်2နှစ်ပေါင်းနှစ်ကြားအမျိုးသားများတွင်% 39 မှ 40% ကနေအရွယ်ရှိ) အတိတ် epidemiological စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်ဒေတာကနေမတူညီတဲ့ဖြစ်ဟန်သော 50% ခဲ့သည် ။ T ကသူ 40-51 နှစ်ပေါင်းအုပ်စု ED မြင့်မားပျံ့နှံ့သည်ဤအဖြစ်ကရှင်းပြသည်နိုင်ပါတယ်: ပထမ, မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ပို. ပို. သက်သေအထောက်အထား ED ၏ဖြစ်ပွားမှုငယ်ရွယ်ပြီးလူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများတွင်သိသိသာသာတိုးပွားလာကြောင်းပြသထားပါတယ် , ; မကြာခဏလက်တွေ့လက်တွေ့တွင်သတိမမူသောဤဆောင်များတွင်အတွက်တင်ပြပျော့ ED (အားလုံးအတွက် 53.5%, ရလဒ်များကိုမှာပြထားတဲ့မဟုတ်) ၏ဒုတိယအမြင့်မားအချိုးအစား, ; တတိယအနေနဲ့တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုလူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများတွင်တင်ဆက် psychogenic ED မြင့်မားဖြစ်ပွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, အဆိုပါ IIEF-5 ရမှတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ED ဖယ်ထုတ်ပါဘူးစဉ် , ။ T ကဤနေရာတွင် ED, dyslipidemia နှင့်လူနေမှုအကြားမျှသိသာအသင်းအဖွဲ့များတည်ကြသည် ဖြစ်. ,
တဖန်သူတို့သည် ED နှုန်းထားများလူပျိုတို့အတွက်တက်ပြီးသောလေ့လာရေး မှလွဲ. အခြားကောင်းသောအရာမရှင်းပြချက်, ကိုဆက်ကပ်။ အများဆုံးယခင်လေ့လာမှုများလူဦးရေနှုန်းထားအပေါ်အခြေခံပြီးနှင့်ပျော့ ED ပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်အဖြစ်ဒုတိယအကြောင်းပြချက် (လက်တွေ့လက်တွေ့တွင်သတိမမူပျော့ ED) တရားဝင်မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါ shocker ED လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်တွေသို့မဟုတ်အသွေးအားစမ်းသပ်မှုများနှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ထုတ်ဝေသည်။ မတ်လ ၂၅ ရက် ၂၀၁၄ DOI - ၁၀.၁၃၇၁ / journal.pone.25
Yan-Ping Huang, Bin Chen စာပို့၊ Ping Ping ဟောင်ကောင် Xiang Wang၊ Kai Hu, Hao Yang, Tao Zhang, Tan Feng, Yan Jin, Yin-Fa Han, Yi-Xin Wang, Yi-Ran Huang
asexuality status ကိုနှင့်အတူအသက်-အလယ်တန်းနှင့်အထက်အမျိုးသားများတွင် erectile function ကိုအကဲဖြတ်ရန်နှင့်နောက်ထပ်ဒီအခွအေနေအဘို့မိမိတို့တိကျတဲ့အကြောင်းပြချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်။
ပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကြိုးစားမှု (လိင်frequency≥1တစ်လလျှင်အချိန်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Erectile ရာထူးအမည်-5 ၏ညွှန်းကိန်းများနှင့်အဘယ်သူမျှမလိင်ဆက်ဆံရှိခြင်းယောက်ျားသည်နှင့်အညီ, ပျော့ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) သို့ခွဲခြားပြင်းထန် ED နှင့် Non-ED မှအလယ်အလတ်ခဲ့ကြသည်သူအမျိုးသားများအတွက် အနည်းဆုံးအား6လကြာကြိုးစားမှုတစ်ခု asexuality status ကိုရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ED နှင့်အတူသက်ဆိုင်တဲ့အန္တရာယ်အချက်များ 1,531 နှစ် 40 အသက် 80 တရုတ်ယောက်ျားတစ်နမူနာကောက်ယူခဲ့ကြသည်နှင့် asexuality များအတွက် Self-အစီရင်ခံစာအကြောင်းပြချက်တစ်ဦးချင်း asexual ဆောင်များတွင်တှငျမှတျတမျးတငျထားသခဲ့ကြသည်။ နှိုင်းယှဉ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့် multivariate ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များကဤအုပ်စုများအကြားကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
ED နှင့် asexuality status ကို၏ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း 49.9% နှင့် 37.2% ရှိကြ၏။ အဆိုပါ asexuality status ကိုအုပျစု (age≥65, ချိန်ညှိလေးသာမှုအချိုးအစား (OR) 17.69 နှိုင်းယှဉ် ( vs. ) 7.19), ဆီးချိုရောဂါ (2.40 ကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ 2.36 ရေနံစိမ်း OR) အသက်ကြီး၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပြင်းထန် ED အုပ်စုအလယ်အလတ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားအန္တရာယ်အချက်များရှိခဲ့ နှင့်သွေးတိုးရောဂါ (ရေနံစိမ်း OR: 1.78 ကွန်ရက်မှကောက်ယူရရှိ 1.72) ။ အဆိုပါ asexuality status ကိုများအတွက်တိကျသောအကြောင်းပြချက် "erectile အခက်အခဲ" (52.9%), ဒီအသက်အရွယ်မှာလိင်ရှိသည်ဖို့မရှိတော့လိုအပ်သော "," (53.5%) "လိင်အကြောင်းကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး" "(47.7%)," ပြင်းထန်ဖိစီး "ခဲ့ကြ (44.4%), "ပြင်းထန်ပင်ပန်း" (26.3%) နှင့် "တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ" (26.9%) ။
တစ်ဦး asexual status ကိုအတူယောက်ျားပြင်းထန် ED မှအလယ်အလတ်နှင့်အတူယောက်ျားထက်ပညာရေးအဘို့အမြင့်မားအန္တရာယ်အချက်များထဲကနေခံရ၏။ ဒီယာယီ asexuality များအတွက်အကြောင်းပြချက်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အကျိုးစီးပွား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပါဝင်ပေမယ့်ဒီ asexual status ကိုအများစုကတစ်ဦးအပြည့်အဝ ED မှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။
ကိုးကား: Huang က YP, Chen က B, Ping: P, ဝမ် HX, Hu K သည်, et al ။ ဘိုးဘွားရိပ်သာအလယျပိုငျးနှင့်အသက်ကြီးအမျိုးသားများအကြားတွင် (2014) Asexuality ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ PLoS ONE9(3): e92794 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0092794
အယ်ဒီတာ: အဲလစ် YW Chang, Kaohsiung Chang Gung သတိရအောက်မေ့ဆေးရုံ, ထိုင်ဝမ်
Received: အောက်တိုဘာလ 30, 2013; လက်ခံခဲ့သည်: ဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2014; Published: မတ်လ 25, 2014
မူပိုင်: © 2014 Huang က et al ။ ဒါက၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေထားတဲ့ Open-access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် ကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်, အရာမရှိသောအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြု, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, မည်သည့်အလတ်စားအတွက်မျိုးပွား, မူရင်းစာရေးသူနှင့်အရင်းအမြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်ဖြစ်သည်။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း: ဒီလေ့လာမှုကတရုတ်အမျိုးသားသဘာဝသိပ္ပံဖောင်ဒေးရှင်း (အမှတ် 81270741) ထံမှထောက်ပံ့ငွေများကငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ရှန်ဟိုင်းမြူနီစီပယ်စီမံကိန်း (အမှတ် 08411951700) ၏သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကော်မရှင်။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်နှင့်အတူ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုသက်ဆိုင်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများတိုးပွားလာကြသည်ကို၎င်း, လူလတ်ပိုင်းနှင့်အသက်ကြီးလူကြီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများစစ်တမ်းကောက်ယူနှင့်ကုသမှုအတွက်အများအပြားလေ့လာမှုများအတွက်အသုံးအများဆုံးပစ်မှတ်လူဦးရေဖြစ်ကြသည်။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်လေ့လာမှုများ၏ကြီးထွားလာသောအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆွေးနွေးအသုံးအများဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်ပါသည်, သေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများအတွက်ပညာရေးကနေကွဲပြားစေခြင်းငှါအရာ asexuality status ကိုများအတွက်ကန့်သတ်သတင်းအချက်အလက်လည်းမရှိ။ ယောက်ျား၏ 2-3% ဝန်းကျင်ဉျးဆဲအမြဲတမ်း asexuality အခွအေနေဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်သေးတဲ့ရောဂါအဖြစ်သတ်မှတ်မပေးသည့်အတိုင်း , တစ်ဦး asexuality status ကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံခဲ့ပေမယ့်လိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှုဆီဦးတည်စိတ်မတစ်ဦးအဆင့်တွင်ယခုနေသောအလယ်တန်းအသက်နှင့်အထက်အမျိုးသားများတွင်ယာယီသို့မဟုတ်နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဇာတ်စင်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ မကြာခဏဆိုသလိုနိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်းလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်, အချိန်ကြာမြင့်စွာမလိင်ကွဲလိင်ဆက်ဆံမှုရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးပညာရှင်များအနေနဲ့ asexuality status ကို psychogenic အချက်များ, ဘာသာရေး, လိင်ဆက်ဆံဖက်များနှင့်ပင်လိင်တူဆက်ဆံခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား, သူတို့ကဤ asexual ယောက်ျားအကဲဖြတ်ရန်ရန်ပျက်ကွက် ED ဆုံးဖြတ်ရန် Erectile ရာထူးအမည် (IIEF) ၏။ asexuality status ကိုအကဲဖြတ်မစံအကြံပြုချက်များအဖြစ်ဘယ်လိုစစ်မှန်တဲ့ erectile function ကိုအတည်ပြုရန်နှင့်ဤဆောင်များတွင်အတွက် asexuality များအတွက်တိကျသောအကြောင်းပြချက်စူးစမ်းဖို့အထူးသဖြင့်အရေးပါမှု၏ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်ယနေ့အထိမရှိပြည့်စုံ, ကိုယ်စားလှယ်နှင့်လူဦးရေ-based data တွေကိုဆေးသမား asexuality ၏ status ကိုနားလည်ကူညီရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ရှန်ဟိုင်းအိုမင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်တစ်ဦးဦးဆောင် ယူ. တရုတ်၌ဟောင်းသောလူဦးရေဖွဲ့စည်းမှုနှင့်အတူပထမဦးဆုံးဧရိယာဖြစ်လာသည်။ 65 ကျော်လူများ၏အရေအတွက်မှာယခုနှစ် 2025 လေးသန်း၏တစ်ဦးအထွတ်အထိပ်ရောက်ရှိ, အဲဒီနောက်စုစုပေါင်းလူဦးရေရဲ့ 29% သိမ်းပိုက်လိမ့်မယ် ။ ထို့ကြောင့်ရှန်ဟိုင်းအတွက်အိုမင်းလူဦးရေတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်စဉ်းစားနိုင်, နှင့်အထီးလူဦးရေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုလေ့လာနေများအတွက်အကောင်းဆုံးနမူနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းကြီးမားသောလူဦးရေ-based လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဆေးခန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော ED နှင့် Non-ED နှင့်အတူ asexuality status ကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦး asexual status ကိုနှင့်အတူအသက်-အလယ်တန်းနှင့်အထက်အမျိုးသားများအတွက် erectile function ကိုအတည်ပြုရန်ကြီးနှင့်လူမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ , -demographic လက်တွေ့နှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ထပ်မံ asexuality များအတွက်တိကျသောအကြောင်းပြချက်ခွဲခြားစိတ်ဖြာ။
ဒီလေ့လာမှုက 40 ကနေအသက် 80 နှစ်အလယ်တန်းအသက်နှင့်အထက်အမျိုးသားများတွင်လိင်နှင့်ကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ နှစ်ဆယ်-လူ့အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုမြို့ပြဗဟိုဧရိယာ, ရောဂါဗေဒကျွမ်းကျင်သူများအားဖြင့်မြို့ပြပြင်ဧရိယာနှင့်မြို့ပြမြိတ်ဧရိယာအဖြစ် stratified ခဲ့ကြသည်။ ခုနစျပါးအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ဦး stratified ကျပန်းနမူနာနည်းလမ်းအားဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအတွက်ကိုအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။ ကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့်သင်တန်းသားများကိုပိုစတာနေဖြင့်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ (2008 ထံမှ 2011 ဖို့) ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအဆင့်စဉ်အတွင်း Self-စောင့်ရှောက်မှုစွမ်းရည်နှင့်တစ်ဦးထက်ပိုတနှစ်အဘို့မွို့၌နထေိုသူကိုယောက်ျားအင်တာဗျူးများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီခဲ့ကြသည်။ မွေးရာပါဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမမှန်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်မွေးရာပါပုံပျက်သောရှိခဲ့သူဘာသာရပ်များ, လေးနက်ရောဂါများ (ဆိုလိုသည်မှာပြင်းထန်နှလုံးရောဂါနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ရောဂါမမှန်, သိသာကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာနှင့် / သို့မဟုတ် Hepatic ကမောက်ကမဖြစ်မှု) နှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူသို့မဟုတ်ရိုးရိုးတိမ်းညွတ်, အရည်အချင်းပြည့်မီ၏စိစစ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။ အားလုံးသည်မမှန် Self-အစီရင်ခံစာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစံချိန်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အင်တာဗျူးကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ 1,720 ရထိုက်ခွင့်ဖြေဆိုသူ, 1,591 In-အိမ်မှာ protocol သည်အခြေခံပြီးစီးခဲ့သည်။ ယင်းအခြေခံစစ်တမ်းမှမူရင်း 1,591 ဖြေဆိုသူ, 60 အဆိုပါစာရင်းဇယားများအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီ 1,531 ယောက်ျား left ရာ, ထိုကွဲလွဲသို့မဟုတ်မပြည့်စုံသည့်ဒေတာအဖြစ်ဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်။
လယ်ပြင် protocol ကိုမက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှု၏ပုံစံနှင့်အညီတီထွင်ခဲ့သည် ။ အတိုချုပ်တစ်ဦးလေ့ကျင့်သင်ကြားလယ်ကွင်းနည်းပညာရှင် / phlebotomist အကြီးစားကွင်းဆင်းများအတွက်တီထွင်စံသုတေသန protocols များနှင့်အညီလူထုဝန်ဆောင်မှုစင်တာမှစသောသူ၏အိမ်တွင်တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်သွားရောက်ခဲ့ တစ်ယေဘုယျကျန်းမာရေးမေးခွန်းလွှာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ status ကိုအကဲဖြတ်တူရိယာအုပ်ချုပ်ခွင့်, လူဦးရေဒေတာစုဆောင်းနှင့်သွေးနမူနာအစာရှောင်ရရှိခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုကအဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြန်လည်သုံးသပ်ဘုတ်အဖွဲ့ခွင့်ပြုချက် (Renji ဆေးရုံ, ရှန်ဟိုင်း။ အမှတ် RJLS2008175) ကိုလက်ခံရရှိနှင့်စာဖြင့်ရေးသားအသိပေးသဘောတူညီခကျြအားလုံးလေ့လာမှုသင်တန်းသားများအားဖြင့်ပေးထားခဲ့သည်။ အားလုံးစုဆောင်းဒေတာရှန်ဟိုင်း၏သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာကော်မရှင်နှင့် Andrology ၏ရှန်ဟိုင်းအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုလုံးတွင်တွေ့နိုင်ပါသည်သော ACCESS စနစ်အပေါင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ module ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ထူထောင်နေတဲ့ဒေတာဘေ့စသို့အပ်လုဒ်လုပ်ထားခဲ့ကြသည်။
သုံးသွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတာရရှိသောခဲ့ကြသည်။ ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း (BMI) နှစ်ထပ်မီတာဖြင့်တိုင်းတာအမြင့်ခွဲခြားကီလိုဂရမ်အတွက်တိုင်းတာအလေးချိန်အဖြစ်တွက်ချက်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) ကအမျိုးအစားခွဲခြားမှုကိုအသုံးပြုပြီးခွဲခြားခဲ့သည် : အဝလွန် (≥25ကီလိုဂရမ် / မီတာ2) သို့မဟုတ်မ (<25 ကီလိုဂရမ် / မီတာ2) ။ ခါးလုံးပတ် (WC) တိုင်းတာမှုများကိုအလယ်ဗဟို adiposity အတိုင်းအတာအဖြစ်အသုံးပြုပြီးအဝလွန်ခြင်း (≥90 cm) or not (<90 cm) .
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ status ကို၏အကဲဖြတ်နှငျ့ ပတျသကျ. , လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်တစ်ဦးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမေးခွန်းလွှာပုဂ္ဂလိကအတွက်ပြီးစီးများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်အားပေးပြီးမှခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမလိင်ဆက်ဆံဒါမှမဟုတ်အတိတ်6လအတွင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းရှိခြင်း: ခုနှစ်တွင်အခြေခံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ status ကိုမေးခွန်းလွှာယောက်ျားနှစ်ဦးကိုအဆင့်ဆင့်သို့သူတို့ကိုယ်သူတို့ခွဲခြား။ နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း Erectile ၏အမည် (IIEF-5) ၏တစ်ဦးက 5-item တခုကိုပုံစံပုဂ္ဂလိကပိုင်အတိတ် 1 လအတွင်း≥6လိင်ဆက်ဆံတဲ့ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူဘာသာရပ်များမှတစ်လလျှင်အချိန်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်, သူတို့သုံးအဆင့်ဆင့်သို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်: Non-ED (IIEF-5≥22), ပျော့ ED (21≥IIEF-5≥12) နှင့်ပြင်းထန်သော ED (11≥IIEF-5≥5) မှအလယ်အလတ်။ အနည်းဆုံးအား6လကြာမျှလိင်ဆက်ဆံကြိုးစားမှုနှင့်အတူဖြေဆိုသူတစ်ဦး asexuality status ကိုရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ လိင်ကွဲမိတ်ဖက် ( "ကြင်ဖော်မဲ့မုဆိုးမ, ကွာရှင်းသို့မဟုတ်ကွဲကွာ" နှင့် "ဆင်းရဲသားကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာ"), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွား ( "လိင်အကြောင်းကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး"), erectile ပြဿနာများ ( "erectile အခက်အခဲ"), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပါအဝင် asexuality status ကိုဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အလက်, သဘောထားများ ( "မရှိတော့လိုအပ်သောဒီအသက်အရွယ်မှာလိင်ရှိသည်"), လူမှုရေးနှင့်ဘဝစိတ်ဖိစီးမှု ( "ပြင်းထန်ဖိစီး", "ပြင်းထန်ပင်ပန်း" နှင့် "အနိမ့်ဘဝကိုကျေနပ်အားရမှု") နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ ( "ပုံမှန် masturbatory စိုက်ထူ" နှင့် "အားနည်းနေ masturbatory စိုက်ထူ" ), တစ်ဦးချင်းလူဦးရေအတွက်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတော့ asexuality status ကိုများအတွက်သတ်မှတ်အကြောင်းပြချက်အင်တာဗျူးတွေများစုဆောင်းခြင်းသတင်းအချက်အလက်ထံမှရေစက်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းအခြေခံအင်တာဗျူးကနေ data ကိုစိတ်ဝင်စားမှုများ၏လူနေမှုပုံစံစတဲ့အချက်တွေအကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကို ( "ပုံမှန်" စဉ်ဆက်မပြတ်ထက်ပို5လအတွင်းအဘို့, အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပတ်ကိုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်) အတိတ်3နှစ်များတွင်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းမေးခဲ့သည် ။ ဘာသာရပ်များ '' ဓလေ့ထုံးတမ်းအရက်စားသုံးမှု Khavari နှင့် Farber ၏ဖော်မြူလာကိုအသုံးပြုပြီး Self-အစီရင်ခံစာအားဖြင့်ခန့်မှန်းခဲ့သည် ။ သူတို့စစ်တမ်း၏အချိန်မှာဆေးလိပ်ခဲ့ကြသည်နှင့်၎င်းတို့၏တသက်တာမှာ 100 စီးကရက်ထက်ပိုသောက်သည်ခဲ့လျှင်အဖြစ်စီးကရက်မီးခိုးထိတွေ့ Self-အစီရင်ခံစာမှတဆင့်စေ့စေ့မေးမြန်းပြီးခဲ့ပါတယ်, နှင့်လက်ရှိဆေးလိပ်သောက်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည် ။ သောက်သုံးလက်ဖက်ရည်စားသုံးမှု ( "ပုံမှန်" စဉ်ဆက်မပြတ်5တစ်နှစ်ထက်ပိုပြီးအဘို့, အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ရက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်) အတိတ် 1 နှစ်အတွင်းတစ်ကြိမ်နှုန်းမေးခွန်းလွှာမှတဆင့်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် tertiles သို့ခွဲခြားခဲ့သည်။
ဤအ Self-အစီရင်ခံနာတာရှည်ရောဂါရလဒ်များအတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစံချိန်ပြန်လည်သုံးသပ်, ရောဂါဗေဒအစီရင်ခံစာသုံးသပ်ချက်ကို, တယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူး, ဒါမှမဟုတ်ဖြည့်စွက်မေးခွန်းအပါအဝင်နည်းလမ်းများအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အောက်ပါအခြေအနေများ၏တဦးတည်းသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးခဲ့ကြသည်လျှင်အခြေခံမှာသွေးတိုးညွှန်ပြခဲ့သည်: 1) ကိုဘာသာရပ် antihypertensive ဆေးဝါးအသုံးပြုမှုအစီရင်ခံ; 2) ကိုဘာသာရပ်ရဲ့နှလုံးကျုံ့သောအသွေးpressure≥140 mmHg သို့မဟုတ် diastolic အသွေးတော်pressure≥90 mmHg ။ Dyslipidemia သွေးရည်ကြည်စုစုပေါင်းcholesterol≥5.72 mmol / L ကိုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်; နှင့် / သို့မဟုတ်triglycerides≥1.70 mmol / L ကို; နှင့် / သို့မဟုတ်အနိမ့်သိပ်သည်းဆလစ်ပိုပရိုတိန်းcholesterol≥3.64 mmol / L ကို; နှင့် / သို့မဟုတ်လက်စထရော-လျှော့ချဆေးဝါးအသုံးပြုမှု။ ဆီးချိုရောဂါသည်အသွေးglucose≥7.0 mmol / L ကိုနှင့် / သို့မဟုတ် Anti-ဆီးချိုရောဂါဆေးဝါးအသုံးပြုမှုအစာရှောင်တတ်သောအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes နာတာရှည်ဆီးကျိတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေညွှန်းကိန်း (NIH-CPSI), ဆီးကျိတ်ကင်ဆာတူသောလက္ခဏာ (PLS) နိမ့်ဆီးကျေးရွာအုပ်စုလက္ခဏာတွေရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည် (LUTS) ကိုသုံးပြီး, ဒါမှမဟုတ် / နှင့် perineal နှင့် / သို့မဟုတ် ejaculatory နာကျင်မှုသို့မဟုတ်အဆင်မပြေ ။ နိုင်ငံတကာဆီးကျိတ်လက္ခဏာရမှတ် (IPSS), ဒစ်ဂျစ်တယ် rectal စာမေးပွဲ (DRE), ultrasound ၏ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစံချိန်နဲ့ anti-အန်ဒရိုဂျင်ဆေးဝါးများလက်ခံရရှိ Self-အစီရင်ခံညင်သာပျော့ပျောင်းဆီးကျိတ် hyperplasia (BPH) ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုသိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
အားလုံးလေ့လာမှုပုဂ္ဂိုလ်များကိုအောင်မြင်စွာလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အသုံးပြုသည့်တိကျသောကိရိယာများနှင့်နည်းစနစ်နှစ်ခုလုံးကသူတို့ကို oriented တဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ အသွေးတော်နမူနာအစာရှောင်တစ်ခုမှာပြွန် (စီးပွားဖြစ်ရရှိနိုင်ဓါတ်ကူပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် enzymatically ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ) (ကပြုပြင်ထားသော hexokinase enzymatic နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်တိုင်းတာ) သွေးရည်ကြည်ဂလူးကို့စနှင့် lipid assay အဘို့သိမ်းယူခဲ့သည် ။ Non-အစာရှောင်ခြင်းသွေးနမူနာနှစျယောကျအပိုဆောင်းပြွန်ဟော်မုန်း assay ဘို့ရေးဆွဲခဲ့သည် , ,  နှင့်စုစုပေါင်းဆီးကျိတ်တိကျတဲ့ကိုပဲ (TPSA) အသီးသီး။ အားလုံးတို့၏အသွေးစစ်ဆေးမှုများလက်တွေ့ဓာတ်ခွဲခန်းစင်တာ (Renji ဆေးရုံ, ရှန်ဟိုင်း, တရုတ်) တွင်ကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
အားလုံးသင်တန်းသားများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလူဦးရေ (40-51, 52-59, 60-64 နှင့် 65-80) ၏အသက်အရွယ်ဖြန့်ဖြူးရန်နှင့်အညီလေးယောက်အသက်အရွယ်အုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ ပြင်းထန် ED နှင့် asexuality status ကိုမှအလယ်အလတ် Non-ED, ပျော့ ED: လိင်အဆင့်အတန်းလေးအုပ်စုများသို့ခွဲခြားခဲ့သည်။ One-Way ကို ANOVA (Data ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး), Kruskal-Wallis ဟာ (Data Non-ပုံမှန်ဖြန့်ဖြူးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး) နှင့် Chi-စတုရန်းစမ်းသပ်မှု (အဆင့် Data) အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဝိသေသလက္ခဏာများပေါ်လေးအုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်များနှင့် Bonferroni ဆုံးမခြင်းတန်ပြန်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည် မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်၏ဘက်လိုက်မှု။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ multivariate ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များတစ်ဦးလက်တွေ့နှင့်လူနေမှုပုံစံစတဲ့လက္ခဏာများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ status ကိုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ယေဘုယျလက္ခဏာများ, စိတ်ပိုင်းဖြတ်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ စဉ်ဆက်မပြတ် variable တွေကိုယုတ်±စံသွေဖည် (SD) သို့မဟုတ်ပျမ်းမျှ (အနည်းငယ်မျှသာ-အများဆုံး) အဖြစ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြသည်။ စာရင်းအင်း P<0.05 အုပ်စုများအကြားလက်တွေ့အဓိပ္ပါယ်ရှိသောကွဲပြားခြားနားမှု၏ညွှန်ပြထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။ အားလုံးစာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ SPSS13.0 (SPSS Inc ကို, ချီကာဂို, အီလီနွိုက်ပြည်နယ်, အမေရိကန်) ကိုအသုံးပြု။ ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
1,720 ရထိုက်ခွင့်ဖြေဆိုသူကျနော်တို့ 1,591 ဘာသာရပ်များ (92.5 ရာခိုင်နှုန်း) ကနေတုံ့ပြန်မှုကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့် 1,531 ဘာသာရပ်များ (89.0 ရာခိုင်နှုန်း) ကနေနမူနာပြ။ ကွဲပြားခြားနားသောအသက်အရွယ် bracket ကဖြေဆိုသူ၏အချိုးအစားအသီးသီး 12.9% (40-51), 22.6% (52-59), 28.0% (60-64) နှင့် 36.4% (65-80) တို့ဖြစ်သည်။ ED နှင့် asexuality status ကို၏စုစုပေါင်းပျံ့နှံ့အသီးသီး 49.9% (765 / 1,531) နှင့် 37.2% (569 / 1,531) တို့ဖြစ်သည်။ အသက်အရွယ်အုပ်စုများအကြားနာတာရှည်ရောဂါနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ status ကို၏ဖြန့်ဖြူးအပေါ်ပြသ ပုံ 1။ "ဒီအသက်အရွယ်မှာလိင်ရှိသည်ဖို့မရှိတော့လိုအပ်သော", (53.5%) "erectile အခက်အခဲ" (52.9%) "လိင်အကြောင်းကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး" အဓိကအကြောင်းရင်းများ (47.7%) အပါအဝင် asexuality အခြေအနေ, "ပြင်းထန်များအတွက်တိကျသောအကြောင်းပြချက် စိတ်ဖိစီးမှု "(44.4%) နှင့်" masturbatory စိုက်ထူ "(26.9%), အတွက်အကျဉ်းချုံးခဲ့ကြ ပုံ 2.
ပုံ 1 ။ အသက်အရွယ်အုပ်စုများအကြားနာတာရှည်ရောဂါနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ status ကို၏ဖြန့်ဝေ။
ပုံ2။ လိင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲလူဦးရေအတွက် asexuality များအတွက်တိကျသောအကြောင်းပြချက်။
စားပွဲတင် 1 လေးအုပ်စုများအကြားပညာရေးနှင့်ဆက်စပ်အန္တရာယ်အချက်များများ၏ခြားနားချက်များအကျဉ်းချုံး။ အဆိုပါ asexuality status ကိုလူဦးရေအဟောင်းများကိုအသက်အရွယ်အဆင့်မြင့်နှလုံးကျုံ့သွေးဖိအားမြင့် FBG, သွေးရည်ကြည် creatinine နှင့် TPSA အဆင့်နှင့်အနိမ့် LH အဆင့်အထိရှိခဲ့တယ်; နှင့်ဆီးချိုရောဂါနှင့်သွေးတိုးရောဂါများပိုမိုမြင့်မားပျံ့နှံ့ပေးအပ်သည်။
စားပွဲတင် 1 ။ အဆိုပါပါဝင်ယောက်ျား၏လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများ IIEF-5 ရမှတ်အရသိရသည်။
စားပွဲတင်2လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေနှင့်ပညာရေးအန္တရာယ်အချက်များအကြားအသင်းအဖွဲ့များပြသခဲ့သည်။ Logistic ဆုတ်ယုတ်အသုံးပြုခြင်း, ကျနော်တို့ (လေးသာမှုအချိုးအစား (OR) ပြင်းထန် ED နှင့်အသက်ကြီးရမှအလယ်အလတ်အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်အသင်းအဖွဲ့တွေ့ရှိခဲ့ = 8.01, 95% CI: 3.62-17.71; P<0.001), ဆီးချိုရောဂါ (OR = 2.36, 95% CI: 1.16-4.80; P = 0.02), သွေးတိုးရောဂါ (OR = 1.72, 95% CI: 1.07-2.79; P = 0.03), ဆီးကြိတ်ကြီးခြင်းရဲ့ (OR = 3.58, 95% CI: 1.55-8.25; P = 0.03) နှင့် PLS (OR = 5.88, 95% CI: 1.20-28.79; P = 0.03); နှင့် asexuality အခြေအနေနှင့်အသက်အရွယ်အိုမင်း (OR = 18.49, 95% CI အကြားအပြုသဘောဆောင်သည့်ဆက်စပ်မှု: 10.34-33.05; P<0.001), ဆီးချိုရောဂါ (OR = 2.40, 95% CI: 1.36-4.25; P = 0.003) နှင့်သွေးတိုးရောဂါ (OR = 1.78; 95% CI: 1.25-2.55; P = 0.002) ။
စားပွဲတင်2။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအတူသက်ရောက်မှုအချက်များ၏ Bivariate နှင့် multivariate အသင်းအဖွဲ့။
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်, ရှန်ဟိုင်းကနေတစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်အချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီးအများဆုံးအသက်-အလယ်တန်းနှင့်အဟောင်းများကိုလူကြီးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများရှိခဲ့နှင့်ထိုမှတပါး, ယောက်ျားတစ်ဦးသိသိသာသာအရေအတွက်ကို asexuality status ကိုပေးအပ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ asexuality status ကိုအတူယောက်ျားပြင်းထန် ED လူဦးရေမှအလယ်အလတ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားအန္တရာယ်အချက်များခံစားခဲ့ရနှင့် asexuality status ကိုသာအနည်းငယ်ယောက်ျားသူတို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနေစဉ်အတွင်းပုံမှန်စိုက်ထူခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံနေစဉ်မိမိတို့၏ asexuality များအတွက်အများဆုံးအကြောင်းပြချက်, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာ ED ၏စုစုပေါင်းပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဘုံအန္တရာယ်အချက်များအာရှနှင့်အနောက်တိုင်းနိုင်ငံများတွင်ယခင်သုတေသနထောက်ခံ , , , ။ အဆိုပါထူထောင် ED အန္တရာယ်အချက်များဟောင်းအသက်, ဆီးချို, သွေးတိုး, ဆီးကြိတ်ကြီးခြင်းရဲ့နဲ့ PLS ပါဝင်သည်နှင့်အသက်ကြီးလွတ်လပ်သောအန္တရာယ်အချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သို့သျောလညျး, ငါတို့သည်လည်းဒီလူဦးရေအတွက်အများအပြားညီမျှမှုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ 40-51 နှစ်ပေါင်းအတူယောက်ျားအတွက်ပညာရေး၏ပျံ့နှံ့မှု (58.6 နှင့်2နှစ်ပေါင်းနှစ်ကြားအမျိုးသားများတွင်% 39 မှ 40% ကနေအရွယ်ရှိ) အတိတ် epidemiological စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက်ဒေတာကနေမတူညီတဲ့ဖြစ်ဟန်သော 50% ခဲ့သည် ။ 40-51 နှစ်ပေါင်းအုပ်စု ED ၏မြင့်ပျံ့နှံ့သည်ဤအဖြစ်ကရှင်းပြသည်နိုင်ပါတယ်: ပထမ, မကြာသေးမီနှစ်များတွင် ပို. ပို. သက်သေအထောက်အထား ED ၏ဖြစ်ပွားမှုငယ်ရွယ်ပြီးလူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများတွင်သိသိသာသာတိုးပွားလာကြောင်းပြသထားပါတယ် , ; မကြာခဏလက်တွေ့လက်တွေ့တွင်သတိမမူသောဤဆောင်များတွင်အတွက်တင်ပြပျော့ ED (အားလုံးအတွက် 53.5%, ရလဒ်များကိုမှာပြထားတဲ့မဟုတ်) ၏ဒုတိယအမြင့်မားအချိုးအစား, ; တတိယအနေနဲ့တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုလူလတ်ပိုင်းအမျိုးသားများတွင်တင်ဆက် psychogenic ED မြင့်မားဖြစ်ပွားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, အဆိုပါ IIEF-5 ရမှတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ED ဖယ်ထုတ်ပါဘူးစဉ် , ။ ED, dyslipidemia နှင့်လူနေမှုအကြားမျှသိသာအသင်းအဖွဲ့များရှိခဲ့သည်, dyslipidemia နှင့်အတူအီတလီနိုင်ငံရဲ့သုတေသနဒေတာကြောင့်လူနာထံမှကွဲပြားစေခြင်းငှါ, အရာ  သို့မဟုတ် / နှင့်ဆိုးရွားသောလူနေမှု ,  ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးဆဲ၏တိုးမြှင့်အန္တရာယ်မှာရှိကြ၏။ ဤရွေ့ကားကိုက်ညီမှုတွေ့ရှိချက်လူဦးရေရဲ့ခြားနားချက်ကနေအစပြုလိမ့်မယ်။ Smith က et al ။  ED နှင့်သွေးရည်ကြည်လက်စထရောနှင့် triglyceride အဆင့်ဆင့်၏စုစုပေါင်း IIEF-15 ရမှတ်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်မှုအကြားမျှအသင်းအဖွဲ့ရှိကွောငျးတှေ့ရှိနှင့်ခန်းမ et al  multivariate မော်ဒယ်မှာကုသမှုမရှိဘူး hyperlipidemia နှင့် ED အကြားမျှသိသာထင်ရှားသောအပြုသဘောဆောင်သောအသင်းအဖွဲ့ရှိခဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုလူ ဦး ရေအရဘာသာရပ်အများစုသည်သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၄.၅ ရာခိုင်နှုန်း> နှစ် ၆၀) ရှိပြီးစနစ်တကျရောဂါများတိုးပွားလာသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏ကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးကျိုးများ (ဥပမာ၊ အစားအစာနှင့်ကာယလှုပ်ရှားမှုအပြုအမူများတိုးတက်မှုများ) ကိုတိုးတက်စေရန်တိုက်တွန်းလိမ့်မည်။ dyslipidemia နှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုသူတို့ထိန်းချုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်မူဤတွေ့ရှိချက်များကဆိုးရွားလှသည့်လူနေမှုပုံစံစသည့်အချက်များထက်စနစ်တကျဖြစ်သောရောဂါများကြောင့်ဤအုပ်စုတွင် ED ကိုပိုမိုထိခိုက်စေနိုင်သည်ဟုအကြံပြုခဲ့သည်။
အဆိုပါ IIEF (သို့မဟုတ် IIEF-5) အမှတ်ပေးစနစ်ကကျယ်ပြန့် erectile function ကိုအကဲဖြတ်ဖို့အသုံးပြုနေသည် , ။ သို့သော်မေးခွန်းလွှာ, "နောက်ဆုံး4ရက်သတ္တပတ်မျှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု" နဲ့လူတို့သညျအဘယ်သူမျှမအကောင့်ယူ6လအတွင်းထက်ပိုမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုးစားမှုရှိခြင်းအဖြစ်ဤနေရာတွင်သတ်မှတ်ခဲ့သည့် asexuality status ကိုအကဲဖြတ်ဘို့ကန့်သတ်ထားသည်။ အဆိုပါလက်တွေ့လမ်းညွှန်ချက်ထဲမှာ asexuality အကဲဖြတ်ဘို့အဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့အကြံပြုချက်များရှိပါတယ်အမျှ asexuality status ကိုအတူဘာသာရပ်များများသောအားဖြင့်အများဆုံးအစီရင်ခံစာများတွင်လေ့လာမှုလူဦးရေထဲကနေဖယ်ထုတ်လိုက်ကြသည်။ ကအနည်းဆုံးယာယီ asexual နေသောလူများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်, အထူးအဟောင်းအသက်အရွယ်လူတွေရှိပါတယ်အဖြစ်သို့သော်ဤမေးခွန်းကိုအဖြေကိုအထူးသဖြင့်အရေးပါမှုသည် , ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာအလယ်တန်းအရွယ်လူအို၏ 37.2% ဤသို့အဖွဲ့ခွဲ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလစျြလြူရှုမရနိုငျသောညွှန်ပြ, asexuality status ကိုပေးအပ်သည်။ asexuality status ကိုအတူဆောင်များတွင်အတွက် erectile function ကို (ပြီးစီး ED သို့မဟုတ်သာမန် erectile function ကို) ၏စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါး status ကိုရှင်းလင်းနိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ ED နှင့်ဆက်စပ်အန္တရာယ်အချက်များ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ပြင်းထန် ED နှင့် Non-ED မှအလယ်အလတ်နှင့်အတူ asexuality status ကိုနှိုင်းယှဉ်။ 60-64 နှစ်နှင့် asexuality status ကိုအတူဖြေဆိုသူအတွက် 65-80 နှစ်ပေါင်းပြုပြင်အန္တရာယ်အချိုးအသီးသီး 2.5 ခွံအားဖြင့်ပြင်းထန် ED မှအလယ်အလတ်နှင့် 2.2 ခြံနှင့်အတူဆောင်များတွင်အတွက်ထက်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ ထိုမှတပါး, asexuality status ကိုနှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ဆီးချိုနှင့်သွေးတိုးရောဂါ၏အန္တရာယ်များပြင်းထန် ED လူတို့အားအလယ်အလတ်ထက်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သညျ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်တစ်ခု asexuality status ကိုအတူဖြစ်ပွားမှုအများစုအနေနဲ့ asexuality status ကိုနှင့်အတူပါဆုံးယောက်ျားပုံမှန်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးခဲ့ကတည်းကနားလည်ထားတဲ့အပြည့်အဝ ED, ဆက်စပ်သောမည်အကြောင်းတည်းအကြံပြုသည်။
အထက်ပါအခြအတည်ပြုရန်ကြိုးစားတှငျကြှနျုပျတို့တစ်ဦးချင်းလိင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိဘဲသူတို့အားယောက်ျားအတွက် asexuality များအတွက် Self-အစီရင်ခံစာအကြောင်းပြချက်စုဆောင်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုအတွက် Self-အစီရင်ခံစာသတင်းအချက်အလက်တိုက်ရိုက်ဖျောပွစိစစ်အတည်ပြုထောက်ခံသောဤ asexuality များအတွက်အဓိကအကြောင်းပြချက်အဖြစ် "erectile အခက်အခဲ" မှတ်ပု asexuality status ကိုအမျိုးအစားအမျိုးသားများတွင်ယောက်ျား၏ 52.9% ပြသခဲ့သည်။ လူမှုရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်စားပြုထားတဲ့ "ပြင်းထန်ဖိစီး" (44.4%), "ပြင်းထန်ပင်ပန်း" (26.3%), "ဆင်းရဲသားကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဆက်ဆံရေး" (4.4%) နှင့် "အနိမ့်ဘဝကိုကျေနပ်အားရမှု" (3.0%), ဒထို့ပြင်တိုင်ကြားစာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများနှင့်စိုက်ထူအပေါ်ဆိုးရွားသောသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေဖိစီး , လည်းဒီလူဦးရေအတွက် asexuality ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်ရှိကြ၏။ asexuality status ကိုနှင့်အတူပါဆုံးယောက်ျား erectile အခက်အခဲခံစားခဲ့ရအဘယ်ကြောင့်ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ပိုငျးတှငျကရှင်းပြသည်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ asexual status ကိုနှင့်အတူပါဆုံးယောက်ျား (53.5%) "လိင်အကြောင်းကိုဂရုမစိုက်ပါဘူး" နှင့် asexuality များအတွက်အခြားနှစ်ဦးကိုအဓိကအကြောင်းရင်းများအဖြစ် (47.7%) "ဒီအသက်အရွယ်မှာလိင်ရှိသည်ဖို့မရှိတော့လိုအပ်သော" မှတ်ယူကြောင်းမှတ်ချက်ပြုနှင့်ယောက်ျားပုံ ဤအအကြောင်းပြချက်တွေပေးပုံမှန် erectile function ကိုရှိပေလိမ့်မည်။ လိင်နှင့်လိင်အကျိုးစီးပွားမရှိခြင်းဆီသို့ဦးတည်သဘောထားတွေ: တကယ်တော့ခုနှစ်, ဖြစ်ရပ်ဆန်းနှစ်ခုရှုထောင့်ပါဝင်ပတ်သက်။ asexual status ကိုနှင့်အတူပါဆုံးယောက်ျားနဲ့လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြိုတင်တက်ကြွလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝခဲ့သည့်အတိုင်းဒီမှာ asexuality status ကိုတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသို့မဟုတ်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်သို့မဟုတ် / နှင့်လိင်တိမ်းညွတ်ရာမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့အိမ်မထောင်ဘဲနေခြင်းကနေကကြားနေအရာအမြဲတမ်း asexual အခွအေနေကနေကွဲပြားဖြစ်ပေါ်သည်ကို ။ ထို့ကြောင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ၏ခြားနားချက်များအတွက်အများဆုံးဖွယ်ရှိအကြောင်းပြချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများတိုးမြှင့်အသက်အရွယ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဆိုးရွားလာနေသောကျန်းမာရေးကိုအန္တရာယ်ပြုပါမည်ဟုသောစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဥရောပအမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှု (EMAS) တွင်ဒေတာတွေနဲ့ကိုက်ညီသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားမရှိခြင်းဟောင်းအသက် (65.70 ± 8.20 နှစ်ပေါင်းဆိုလို) နဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းစေခြင်းငှါ, (Non-ED နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ) နိမ့်စုစုပေါင်း Testosterone နဲ့နာတာရှည်ရောဂါများပါလာတဲ့, ။ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်ကိုလိင်စိတ်တစ်တဖြည်းဖြည်းဆုံးရှုံးမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်တစ်ဦးကကျဆင်းနေသွေးရည်ကြည် , သွေးရည်ကြည် testosterone ဟော်မုန်းနှင့်တစ်ဦးချို့တဲ့ penile arterioles နှင့်လိုဏ်ဂူ sinusoids ၏ vasodilation impairing အားဖြင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုသွေးဆောင်ခြင်းငှါ, ။ ထို့ကွောငျ့ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒအဖြစ်ကောင်းစွာ ED ၏အန္တရာယ်အချက်များနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
တစ်ခုတည်းအခြေအနေနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတွေ့အကြုံနှင့်အတူယောက်ျားသူတို့အဘယ်သူမျှမလိင်ဆက်ဆံကြိုးစားမှုခဲ့လျှင်ပင်ပုံမှန် erectile function ကိုထိန်းသိမ်းထားကြောင်းအကြံပြုပေလိမ့်မည်။ သို့သျောကြှနျုပျတို့ asexual status ကိုအတူယောက်ျား၏သေးငယ်တဲ့အချိုးအစားလေ့လာမှုမှာ asexuality များအတွက်အကြောင်းပြချက်အဖြစ် (4.3%) "တစ်ခုတည်းမုဆိုးမ, ကွာရှင်းသို့မဟုတ်ကွဲကွာ" မှတ်ယူပါ။ တှေ့ရှိ asexuality နှင့်အတူယောက်ျား၏လေးပုံတပုံဝန်းကျင်ကိုသူတို့ masturbatory အတွေ့အကြုံကိုခဲ့အစီရင်ခံခဲ့သော်လည်း, ထိုသူတို့ကိုသာ 35.3% (အားလုံးအတွက် 9.5%) သူတို့ပုံမှန် masturbatory စိုက်ထူခဲ့ဆင်ခြင်၏။ asexuality ဘို့အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးအစီရင်ခံခဲ့သည်ပေမယ့်တိုတောင်းခုနှစ်တွင်, သူတို့ထဲကအများစုဟာ erectile အခက်အခဲနှင့်၎င်း၏အန္တရာယ်အချက်များမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုကလေ့ကျင့်သင်ကြားအင်တာဗျူးခြင်းဖြင့်ကောက်ယူတဲ့လူဦးရေ-based အလားအလာဆောင်များတွင်လေ့လာမှုဒီဇိုင်း, ကြီးမားတဲ့ခြုံငုံနမူနာအရွယ်အစားနှင့်စံချိန်စံညွှန်းမီ protocols များအပါအဝင်အများအပြားအားသာချက်ရှိပါတယ်။ ရွေးချယ်ရေးဘက်လိုက်မှုကြောင့်စုဆောင်းမှုမှာအတော်လေးမြင့်မားတဲ့တုန့်ပြန်မှုနှုန်း (92.5%) မှလျော့ချခဲ့သည်။ အရေးကြီးတာကကျနော်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အဖွဲ့ခွဲအဖြစ် asexuality နှင့်အတူတိများနှင့်လျှို့ဝှက်ဘာသာရပ်များနှင့်အတူ asexuality status ကိုသတ်မှတ်။ asexuality အကဲဖြတ်ဘို့အဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့ထောက်ခံချက်လက်တွေ့လက်တွေ့တွင်တည်ရှိအဖြစ် asexuality status ကို၏တူးဖော်ရေးကျင့်သုံးလာခဲ့သည်မှာ vis တစ်ဦးအသက်တာရှည် asexuality စာပေမှ add လိမ့်မည်။ သို့သော်ဤလေ့လာမှု၏ကန့်သတ်မှုရလဒ်များအနက်ကိုစဉ်းစားရပါမည်။ အင်တာဗျူးနည်းလမ်းများကောင်းစွာတရားဝင်အဖြစ်လက်ခံကြသည်ပေမယ့်အများဆုံးအလားတူသုတေသနလေ့လာမှုများကဲ့သို့ပင်တစ်ဦးစိုးရိမ်ပူပန်မှုအချို့ဒေတာ Self-အစီရင်ခံခဲ့ကြသည်သောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုဖြေရှင်းရန်ကျနော်တို့ Self-အစီရင်ခံရလဒ်များကိုကိုထောကျပံ့ဖို့တတ်နိုင်သမျှရည်မှန်းချက်ဒေတာစုဆောင်း။ နောက်ထပ်စိုးရိမ်ပူပန်ကျွန်ုပ်တို့အမျိုးသမီးမိတ်ဖက်များ၏ကျန်းမာ status ကို ပတ်သက်. ဆိုင်တဲ့အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းမငါတို့သည်ငါတို့၏လူဦးရေအတွက်ယာယီ asexuality ထံမှကွဲပြားခြားနားသောအရာဘဝ-ရှည်လျား asexual status ကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမပြုခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်မှာ asexuality status ကိုအသက်ကြီးမှအလယ်တန်းအရွယ်ကြားတွင်မကြာခဏဖြစ်ခဲ့သည်, ဤအခြေအနေနှင့်အတူယောက်ျားပြင်းထန် ED မှအလယ်အလတ်နှင့်အတူယောက်ျားထက်ပညာရေးအဘို့အမြင့်မားအန္တရာယ်အချက်များခံစားခဲ့ရသည်။ တစ်ဦး asexuality status ကိုများအတွက်အကြောင်းပြချက်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အကျိုးစီးပွား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပါဝင်သော်လည်း asexuality status ကိုအများစုကအပြည့် ED တစ်ခွအေနအေမှစွပ်စွဲနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုများချ 18 နှစ်ရှိပြီဖို့, ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦး asexuality status ကိုနှင့်အတူလူဦးရေအတွက် psychogenic erectile function ကိုနှိုင်းယှဉ်အော်ဂဲနစ်၏ပျံ့နှံ့အကဲဖြတ်ရန်နှင့်လည်းအများကြီးလူပျိုတို့ကိုအပါအဝင်အပြီးအပိုင် asexual ယောက်ျား, တစ်ပုဒ်မခွဲသိရှိနိုင်ဖို့သင့်လျော်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုဒီဇိုင်းလိုအပ်နေပါသည်။ အဆုံးစွန်သောလည်းလူပျိုတို့အတွက်တက်ကြွစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝတွေအတွက်စိတ်မသွေးဆောင်ခြင်းအလိုငှါ, ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိမသိရ, အချက်များသတ်မှတ်နိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မယ်။
အဆိုပါစာရေးဆရာကဒီလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်နဲ့သူ့ရဲ့အကူအညီအတွက်ပါမောက္ခ Cadavid Nestor Gonzalez-Cadavid (Urology ဌာန, ဆေးပညာ UCLA ကျောင်း, ချားလ်စ် Drew တက္ကသိုလ်) ကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။
ပဋိသန္ဓေနှင့်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်း: ဘီစီ YW YH ။ PP HW KH hy TF YJ tz YH: အစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: YH HW KH hy TF YJ tz ။ လှူဒါန်းခဲ့ဓါတ်ကူပစ္စည်း / ပစ္စည်းများ / ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေးကိရိယာများ: KH hy TF YJ tz ။ YH HW: စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။ Intellectual အကြောင်းအရာကထပ်မံစိစစ်တည်းဖြတ်: Bin ကိုချန် Ping Ping ဟောင်ကောင်အဘိဓါန် Xiang ဝမ် Kai ဟူ Hao ကယန် Tan က Feng ယန် Jin က Tao က Zhang က။
1 ။ Bogaert AF (2004) Asexuality: တစ်အမျိုးသားရေးဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာများတွင်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ။ J ကိုလိင် Res 41: 279-287 ။ Doi: 10.1080 / 00224490409552235
2 ။ Prause N ကို, ဂရေဟမ်, CA (2007) Asexuality: ခွဲခြားနှင့်စရိုက်လက္ခဏာတွေ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 36: 341-356 ။ Doi: 10.1007 / s10508-006-9142-3
3 ။ ဝေ X ကို, Zakus: D, Liang H ကို Sun, X ကို (2005) ကရှန်ဟိုင်းကိစ္စတွင်: လူဦးရေအိုမင်းများ၏စိန်ခေါ်မှုကိုတုံ့ပြန်အသိုင်းအဝိုင်းကျန်းမာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၏အရည်အသွေးအကဲဖြတ်။ 20-269: int J ကိုကနျြးမာရေး Plann 286 များကိုစီမံကွပ်ကဲ။ Doi: 10.1002 / hpm.814
4 ။ မက်ဆာချူးဆက်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှုကနေအလားအလာရလဒ်များကို: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အချက်များနှင့်အဖြစ်အပျက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြား Araujo AB, ဂျိုဟန်သမဝါယမ, Feldman HA, ဒါဘီ, CA, McKinlay JB (2000) ဆက်ဆံရေး။ ရောဂါ 152 ၏အမေရိကန်ဂျာနယ်: 533-541 ။ Doi: 10.1093 / aje / 152.6.533
5 ။ Perloff: D, et al ဖှယျကို C, Flack J ကို, Frohlich အီး, Hill က M ကို။ sphygmomanometry အားဖြင့် (1993) လူ့သွေးဖိအားပြဌာန်းခွင့်။ စောင်ရေ 88: 2460-2470 ။ Doi: 10.1161 / 01.cir.88.5.2460
6 ။ အာရှလူဦးရေနှင့်မူဝါဒနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမဟာဗျူဟာအဘို့အယင်း၏သက်ရောက်မှုတွေများအတွက် WHO က (2004) သင့်လျော်သောကိုယ်ခန္ဓာကို-mass index ။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet 363: 157-163 ။ Doi: 10.1016 / s0140-6736 (03) 15268-3
7 ။ သငျတို့သ Y ကို, Bao Y ကို, Hou X ကို, ပန်က X, Wu H ကို, et al ။ ရှန်ဟိုင်းမြို့ပြဧရိယာထဲမှာတစ်ဦး 2009 နှစ်နောက်ဆက်တွဲလေ့လာမှု: တရုတ်လူဦးရေအတွက်ဝမ်းဗိုက်အဝလွန်မှုအတွက်ခါးလုံးပတ် cutoffs ၏ (7.8) သတ်မှတ်ခြင်း။ အဝလွန်ခြင်း 33 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်: 1058-1062 ။ Doi: 10.1038 / ijo.2009.134
8 ။ Nechuta SJ, Shu XO, et al Li က HL ယန်, G, Xiang YB ။ အလားအလာဆောင်များတွင်လေ့လာမှု: တရုတ်အမျိုးသမီးတွေအကြားစုစုပေါင်းနှင့်အကြောင်းမရှိ-တိကျတဲ့သေဆုံးမှုအပေါ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့-related အချက်များ (က 2010) ပေါင်းလိုက်သောသက်ရောက်မှု။ PLoS ဆေးဝါး 7: e1000339 ။ Doi: 10.1371 / journal.pmed.1000339
9 ။ Khavari Ka, Farber PD (1978) အရက်သောက်များ၏အရေအတွက်နဲ့အကဲဖြတ်များအတွက်တစ်ဦးကပရိုဖိုင်းကိုတူရိယာ။ အဆိုပါ Khavari အရက်စမ်းသပ်ခြင်း။ J ကိုလုံးအရက်သောက် 39: 1525-1539 ။
10 ။ Kleinman KP, Feldman HA, ဂျိုဟန်သမဝါယမ, ဒါဘီ, CA, McKinlay JB (2000) ကမက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်အမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှုအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအဆင့်အတန်းများအတွက်အသစ်အငှား variable ကို။ လက်တွေ့ရောဂါ 53 ၏ဂျာနယ်: 71-78 ။ Doi: 10.1016 / s0895-4356 (99) 00150-x
11 ။ Egan BM, Zhao နှင့် Y ကို, axon RN (2010) အမေရိကန်ပျံ့နှံ့အတွက်ခေတ်ရေစီးကြောင်း, အသိပညာ, ကုသမှုနှင့်သွေးတိုးရောဂါကိုထိန်းချုပ်, 1988-2008 ။ ဂျေအေအမ်အေ: အမေရိကန်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး 303 ၏ဂျာနယ်: 2043-2050 ။ Doi: 10.1001 / jama.2010.650
12 ။ နီကယ် JC, Downey J ကို, Hunter: D, ဆီးကျိတ်ကင်ဆာကဲ့သို့ရောဂါလက္ခဏာများ၏ Clark က J ကို (2001) ပျံ့နှံ့နေတဲ့လူဦးရေအတွက်ကနျြးမာရေးအမျိုးသား Institutes နာတာရှည်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာလက္ခဏာအညွှန်းကိန်းကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုကိုအခြေခံသော။ urology 165 ၏ဂျာနယ်: 842-845 ။ Doi: 10.1097 / 00005392-200103000-00026
13 ။ Myers GL, Cooper ကထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, င်း CL, Smith က SJ (1989) ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး-အမျိုးသားနှလုံး, အဆုတ်နှင့်သွေး Institute မှ Lipid Standardization အစီအစဉ်များအတွက်စင်တာများ။ တိကျမှုနှင့်တိကျသော lipid တိုင်းတာဖို့ချဉ်းကပ်မှု။ Clin Lab က Med 9: 105-135 ။
14 ။ Krieger ၎င်းကို (1975) ကျန်းမာရေးနှင့်ရောဂါအတွက် ACTH နှင့် corticosteroid Secret ၏ Rhythm, မိမိတို့စမ်းသပ်ပြုပြင်မွမ်းမံ။ 6-785: Steroid တစ်မျိုးဇီဝဓါတုဗေဒ 791 ၏ဂျာနယ်။ Doi: 10.1016 / 0022-4731 (75) 90068-0
15 ။ et al Brambilla DJ သမား, McKinlay သည် SM, McKinlay JB, Weiss SR, ဂျိုဟန်သမဝါယမ။ (1996) တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်ကနေထပ်ခါတလဲလဲသွေးနမူနာခန့်မှန်းခြေ Steroid တစ်မျိုးဟော်မုန်းပမာဏ၏တိကျတိုးတကျအောငျစုဆောင်းပါသလား? လက်တွေ့ရောဂါ 49 ၏ဂျာနယ်: 345-350 ။ Doi: 10.1016 / 0895-4356 (95) 00569-2
16 ။ အမျိုးသမီးတွေအတွက် Longcope ကို C, ဖရန့်ကို C, Morello ကို C, Baker R ကို, Johnston CC ကို (1986) Steroid တစ်မျိုးနှင့် gonadotropin အဆင့်ဆင့်ဟာအနီးအနားသွေးဆုံးနှစ်တာကာလအတွင်း။ Maturitas 8: 189-196 ။ Doi: 10.1016 / 0378-5122 (86) 90025-3
17 ။ et al ဖာနန်ဒက်ဇ-Sanchez ကို C, McNeil CJ, Rawson K ကို Nilsson အို Leung hy ။ သွေးရည်ကြည်အတွက်အခမဲ့နှင့်စုစုပေါင်းဆီးကျိတ်တိကျတဲ့ကိုပဲများ၏တပြိုင်နက်တည်းထောက်လှမ်းဘို့ (2005) One-ခြေလှမ်း immunostrip စမ်းသပ်။ J ကို Immunol နည်းလမ်းများ 307: 1-12 ။ Doi: 10.1016 / j.jim.2005.08.014
18 ။ Marumo K သည်, ဂျပန်အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ Nakashima J ကို, Murai M (2001) ခေတ်-related ပျံ့နှံ့: Erectile ရာထူးအမည်များ၏နိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်းများကအကဲဖြတ်။ int J ကို Urol 8: 53-59 ။ Doi: 10.1046 / j.1442-2042.2001.00258.x
19 ။ Malavige LS, များတွင်ဆီးချိုရောဂါအတွက် Levy JC (2009) Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ J ကိုလိင် Med 6: 1232-1247 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2008.01168.x
20 ။ Shamloul R ကို, Ghanem H ကို (2013) Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ ကမ္ဘာကျော်ဆေးပညာဂျာနယ် Lancet 381: 153-165 ။ Doi: 10.1016 / s0140-6736 (12) 60520-0
21 ။ Lindau ST, Schumm LP သို့ Laumann EO, Levinson W က, O'Muircheartaigh, CA, et al ။ (2007) United States မှာအဟောင်းတွေလူကြီးများအကြားလိင်နှင့်ကျန်းမာရေး၏လေ့လာမှုတစ်ခု။ N ကို Engl J ကို Med 357: 762-774 ။ Doi: 10.1056 / nejmoa067423
22 ။ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ Prins J ကို, Blanker MH, Bohnen လေး, သောမတ်စ်က S, Bosch ရဲ့ JL (2002) ပျံ့နှံ့နေတဲ့: လူဦးရေ-based လေ့လာမှုများတစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ int J ကိုသင်ျခြို Res 14: 422-432 ။ Doi: 10.1038 / sj.ijir.3900905
23 ။ Martins အပြည်ပြည်သွား, Abdo CH (2010) Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် 18-40 နှစ်ပေါင်းအသက်ဘရာဇီးအမျိုးသားများတွင်ဆက်စပ်အချက်များ။ J ကိုလိင် Med 7: 2166-2173 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2009.01542.x
24 ။ Capogrosso P ကို, Colicchia M က, Ventimiglia အီး, Castagna, G, Clementi MC, et al ။ အသစ်ရောဂါ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူလေးထဲက (2013) တစျလူနာနေ့စဉ်လက်တွေ့အလေ့အကျင့်ကနေလူငယ်တစ်ဦးသည်လူ-စိုးရိမ်ဖွယ်ရုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ J ကိုလိင် Med 10: 1833-1841 ။ Doi: 10.1111 / jsm.12179
25 ။ Lee က JC, Benard က F, Carrier က S, Talwar V ကို, Defoy ငါ (2011) အပျော့စား erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျားအထွေထွေ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုလက်တွေ့စမ်းသပ်လူဦးရေကဲ့သို့တူညီသောအန္တရာယ်အချက်များရှိပါသလား? BJU Int 107: 956-960 ။ Doi: 10.1111 / j.1464-410x.2010.09691.x
26 ။ Li က D:, Jiang မှာ X, Zhang က X ကို, ရီ, L, Zhu က X, et al ။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်ဆေးခန်းပြင်ပလူနာအတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ (2012) ပေါင်းစုံပါ pathophysiologic စုံစမ်းစစ်ဆေး။ Urology 79: 601-606 ။ Doi: 10.1016 / j.urology.2011.11.035
27 ။ Rhoden အီး, Teloken ကို C, Sogari P ကို, Vargas Souto ကို C, ပေးစာယူကို C (2002) erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့လေ့လာဖို့တစ်အဖြေရှာတဲ့ tool အဖြစ် Erectile ရာထူးအမည်များ၏ရိုးရှင်းသောနိုင်ငံတကာညွှန်းကိန်း (IIEF-5) ၏အသုံးပြုခြင်း။ ခွန်အားမရှိခြင်းသုတေသန 14 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ်: 245-250 ။ Doi: 10.1038 / sj.ijir.3900859
28 ။ la Vignera S က, Condorelli RA, Vicary အီး, Calogero AE (2012) ုင်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: လက်ရှိသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုအရေးပါအကျဉ်းချုပ်။ J ကို Androl 33: 552-558 ။ Doi: 10.2164 / jandrol.111.015230
29 ။ et al Esposito K ကို Ciotola M က, Giugliano က F, Maiorino MI, Autorino R ကို။ အမျိုးသားများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအပေါ်အထူးကြပ်မတ်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှု (2009) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ J ကိုလိင် Med 6: 243-250 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2008.01030.x
30 ။ Meldrum DR, Gambone JC, မောရစ် MA, Esposito K ကို Giugliano: D, et al ။ (2012) လူနေမှုပုံစံနှင့်ဇီဝဖြစ်စဉ် erectile နှင့်သွေးကြောကျန်းမာရေးကိုပူးတွဲတင်ပြထားဖို့ချဉ်းကပ်။ int J ကိုသင်ျခြို Res 24: 61-68 ။ Doi: 10.1038 / ijir.2011.51
31 ။ Smith က NJ, Sak SC, Baldo အို Eardley ငါ (2007) erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျားအတွက်အသစ်ရောဂါ hyperlipidaemia ၏ပျံ့နှံ့။ BJU Int 100: 357-361 ။ Doi: 10.1111 / j.1464-410x.2007.06988.x
32 ။ et al ခန်းမလုပ် SA, Kupelian V ကို, ရို RC, Travison TG, Link ကို CL ။ (2009) hyperlipidemia သို့မဟုတ်ဘော်စတွန်ဧရိယာအဝန်းကနျြးမာရေး (Bach) စစ်တမ်းကနေ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု ?: ရလဒ်များနှင့်ဆက်စပ်သည်၎င်း၏ကုသမှုဖြစ်ပါတယ်။ J ကိုလိင် Med 6: 1402-1413 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2008.01207.x
33 ။ Nicolosi တစ်ဦးက, Moreira ED Jr က Shirai M က, Bin Mohd Tambi MI, Glasser DB (2003) လေးနိုင်ငံများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ကူးစက်ရောဂါ: erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်ဆက်စပ်မှု၏ Cross-အမျိုးသားရေးလေ့လာမှု။ Urology 61: 201-206 ။ Doi: 10.1016 / s0090-4295 (02) 02102-7
34 ။ Nicolosi တစ်ဦးက, Glasser DB ကင်မ် SC, Marumo K ကို Laumann EO (2005) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အကူအညီနဲ့-ရှာကြံပုံစံများလူကြီးများအသက် 40-80 နှစ်များတွင်အာရှနိုင်ငံများ၏မြို့ပြလူဦးရေ၌တည်၏။ BJU Int 95: 609-614 ။ Doi: 10.1111 / j.1464-410x.2005.05348.x
35 ။ တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ 2008 အဟောင်းတွေတရုတ်လူတို့တွင် Wong က sys, Leung JCS, ဝူး J ကို (1,566) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု, erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ Correlate ။ 6-74: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ 80 ၏ဂျာနယ်။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2008.01034.x
36 ။ ကင်မ် JH, Lau JTF ဟောင်ကောင်လက်ထပ်တရုတ်လူကြီးများအကြားတွင် Cheuk KK (2009) Sexlessness: ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်ဆက်စပ်နေသောအချက်များ။ 6-2997: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာ 3007 ၏ဂျာနယ်။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2009.01367.x
37 ။ Brody က S (2010) ကွဲပြားခြားနားသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၏ဆွေမျိုးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ။ J ကိုလိင် Med 7: 1336-1361 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2009.01677.x
38 ။ Corona, G, Mannucci အီး, Lotti က F, Boddi V ကို, Jannini EA ၏, et al ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအထီးလူနာစုံတွဲဆက်ဆံရေး (2009) ချို့ယွင်းပေးခြင်း hypogonadism နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ J ကိုလိင် Med 6: 2591-2600 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2009.01352.x
39 ။ Brotto LA က, Knudson, G, Inskip J ကို, Rhodes K ကို Erskine Y ကို (2010) Asexuality: တစ်ရောနှော-နည်းလမ်းများချဉ်းကပ်နည်း။ Arch လိင်ပြုမူနေ 39: 599-618 ။ Doi: 10.1007 / s10508-008-9434-x
40 ။ Corona, G, Lee က DM လေးဆယ်, G, O'Connor DB, မဂ္ဂီကို M, et al ။ အသက်-အလယ်တန်းနှင့်အထက်အမျိုးသားများတွင်ယေဘုယျနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက် (2010) ခေတ်-related အပြောင်းအလဲများကို: ဥရောပအမျိုးသားအိုမင်းခြင်းဟာလေ့လာမှု (EMAS) မှရလဒ်များကို။ J ကိုလိင် Med 7: 1362-1380 ။ Doi: 10.1111 / j.1743-6109.2009.01601.x
41 ။ Bassil N ကို (2011) နှောင်းပိုင်း-စတင်ခြင်း hypogonadism ။ Med Clin မြောက်အမေရိက Am 95: 507-523 ။ Doi: 10.1016 / j.mcna.2011.03.001
42 ။ Mikhail N ကို (2006) testosterone ဟော်မုန်း erectile function ကိုတစ်အခန်းကဏ္ဍရှိသည်ဟုပါသလား နံနက် J ကို Med 119: 373-382 ။ Doi: 10.1016 / j.amjmed.2005.07.042